Prime Time မီးစက် ဝယ်ဆောင်ထားစို့ | PTI Company Limited
ယနေ့ခေတ်လို လုပ်ငန်းတိုင်း လုပ်ငန်းတိုင်းမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများတဲ့ ခေတ်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ကောင်းသထက်ကောင်း အောင် အားထုတ်ကြရပါတယ်။ မျိုးတူလုပ်ငန်းတွေအများကြီးထဲကမှ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ပေါက်မြောက်ဖို့ ငွေကြေး အချိန်များစွာ အကုန်ကျခံ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
ထို့အတူပဲ ဒီနေ့ခေတ်လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ လည်း လျှပ်စစ်မီးက မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် မီးပျက်လို့ ကိုယ့်လုပ်ငန်း မထိခိုက်ရလေအောင် မီးစက်တွေဆောင်ထားတတ်ကြပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးပျက်ရတာဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်း အရင်း ပေါ်လိုက်ပြီး မီးပြန်လာချိန်ဟာ မြန်တတ် ကြာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် Transformer လောင်တာ၊ သစ်ကိုင်းကျိုးတာ၊ လှိုင်းပူးတာ မိုးသည်းသည်းမဲမဲ ရွာတာ စတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် မီးပျက်တာဟာ ခဏ နဲ့ပြန်လာသလို ရက်အချို့ကြာမှ ပြန်လာတတ်တွေရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မီးပျက်ချိန်ဟာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကိုယ့်လုပ်ငန်း ဆက်လည်ပတ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုတွေ Product Quality တွေ ကျမသွားဖို့ ဆိုရင် Prime Time Generator ဆောင်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
E-Banking ဖော်ဆောင်နေတဲ့ခေတ်မှာ ဘဏ်တွေဟာ မီးပျက်လို့ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုတွေ အားနည်းမသွားရအောင် Prime Time မီးစက်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
E Sport ရေပန်းစားလာနဲ့အတူ E Sport Center တွေအတွက်လည်း Prime Time Generator ဟာ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
ဒါအပြင် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ အင်စတီကျူတွေ၊ စင်တာတွေ၊ ကောလိပ်တွေ၊ Private School တွေအတွက် လျှပ်စစ်ဟာ မရှိမဖြစ်ပါ။ ဒါကြောင့် Prime Time မီးစက် ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
ဟော်တယ်၊ မိုတယ်၊ Guest House ၊ ဆေးရုံ၊ ရှော့ပင်းမော၊ ဆေးခန်း ၊လေဆိပ်၊ ရုပ်သံ မီဒီယာ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပုံနှိပ်တိုက်၊ ဂျာနယ်တိုက် အစရှိတာတွေမှာ Electronic စနစ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်မီးဟာ အရေးကြီးလာပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှု မနှောင့်နှေးရအောင် လျှပ်စစ်မီး ချက်ချင်းပြန်ရဖို့ အရေးကြီးတာမို့ Prime Generator လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်လို အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ငန်း တွေ များလှတဲ့ခေတ်မှာ မီးပျက်လို့ ခြေလှမ်းတွေ နောက်မကျခဲ့ရအောင် Prime Time ဆောင်ထားကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ PT International Co.,Ltd Power Generator Distributor မှ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
မီးစက်ကို ၂၄ နာရီအတွင်း ကြိုက်တဲ့အချိန်ပျက်လို့ရပြီ!
webadmin Generator Knowledge, Knowledge Sharing
Older Postမီးစက် ဟိ(Heat)တက်တာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
Newer PostWhy should all businesses have generators?